गैरआवासीय नेपाली संघले काठमाडौमा विज्ञ सम्मेलन गर्ने | Rajmarga
गैरआवासीय नेपाली संघले काठमाडौमा विज्ञ सम्मेलन गर्ने
काठमाडौ । गैरआवासीय नेपाली संघले आगामी असोज २६ र २७ गते काठमाडौंमा विज्ञहरुको सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
संघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी २०७५ साल असोज २६ र २७ गते विज्ञहरुको सम्मेलन आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो । नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छलफल हुने गरी विज्ञहरुको सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको संघका महासचिव डा. बद्री केसीले जानकारी दिनु भयो ।
सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालका विज्ञहरु र नेपालसँग जोडिएका विज्ञहरु सहभागी हुनेछन । त्यसैगरी संघले असोज २८ गते भने विधान सभाको पनि आयोजना गर्दैछ । महासचिव केसीले संघको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनले नेपालमा थप लगानी भित्रयाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । संघले सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग आवश्यक परामर्श गरिएको पनि जनाएको छ ।
संघले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई अझ व्यापक र दिगो बनाउनका लागि एक सामूहिक लगानी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि जनाएको छ । महासचिव केसीले कोष निर्माणका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भईरहेको र नेपाल सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिइने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
संघले कोषको बजेट नेपालको विकासका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
Previous post: सेक्सपछि ओछ्यानमा सुतिरहँदा गर्भवती छिटो हुने कुरा यसरी गलत ठहरियो
Next post: पिसावको कस्तो रङ्गले कस्तो रोगको संकेत गर्छ ? आफ्नो पिसावको रङ्ग हेरेर थाहा पाउनुस्